अनुसन्धान भन्छ: तपाईं गल्ती घटाउन चाहनुहुन्छ ? ध्यान गर्नुहोस् :: यार्सान्यूज :: अनुसन्धान भन्छ: तपाईं गल्ती घटाउन चाहनुहुन्छ ? ध्यान गर्नुहोस्
अनुसन्धान भन्छ: तपाईं गल्ती घटाउन चाहनुहुन्छ ? ध्यान गर्नुहोस् कतै तपाईंको हतारमा बिर्सने वा बारम्बार गल्ती गर्ने बानी त छैन!
बिहीबार, कात्तिक ४, २०७८ यार्सान्यूज
कतै तपाईंको हतारमा बिर्सने वा बारम्बार गल्ती गर्ने बानी त छैन! आत्तिनुपर्दैन। नियमित ध्यानको अभ्यासले तपाईंको यो बानी सुधार आउन सक्छ। अमेरिकाको मिसिगन स्टेट युनिभर्सिटीको पछिल्लो अनुसन्धानले ध्यानको नियमित अभ्यासले कुनै पनि व्यक्तिको गल्ती गर्ने आदत घटाउन मद्दत पुग्ने देखाएको छ।
‘ब्रेन साइन्सेस’मा प्रकाशित उक्त अनुसन्धानमूलक लेखका अनुसार सचेतना (अवेरनेस), अनुभूति, विचार वा संवेदनामा केन्द्रित ध्यानले मन र शरीरलाई स्वस्थ र जागरुक राख्न मद्दत गर्छ र मस्तिष्क आएको परिवर्तन तथा जागरुकताले बारम्बार गल्ती गर्ने आदतबाट सजग बनाउँछ।
‘कुनै खालका ध्यान एउटा वस्तु (अब्जेक्ट)मा केन्द्रित भएर गरिन्छ, सामान्यतः कतिपय ध्यान श्वासप्रश्वासलाई हेरेर गरिन्छ। तर, ओपन मनिटरिङ ध्यान चाहिँ अलि फरक छ,’ लिनले भने, ‘यसले चाहिँ तपाईंलाई अन्तर्यात्रातर्फ लैजान्छ र, मन र शरीरमा हुने सबै कुरालाई होसपूर्वक ध्यान दिन दिन सिकाउँछ। यसको उद्देश्य शान्तपूर्वक बस्ने र मन कता जान्छ भन्ने कुरालाई निकटतासाथ अवलोकन गर्नुपर्छ।’
‘इइजीले मस्तिष्कको गतिविधि मिलिसेकन्ड लेभलमा मापन गर्न सक्छ। त्यसकारण सही प्रतिक्रियाभन्दा पनि गल्ती गरेको बेलामा मस्तिष्कको तटस्थ अवस्था कस्तो भयो भनी हामीले एकदमै सही मापन लियौं,’ लिनले भने, ‘गल्ती बोलेको अवस्था वा इरर पोजिटिभिटी भएको आधा सेकेन्डमै स्नायुमा संकेत भेटियो, जुन सचेततासाथ गल्ती पहिचानसँग सम्बन्धित छ।’
‘यो निष्कर्ष ध्यानमाथि केवल २० मिनेटमा गम्भीरता साथ गरिएको प्रदर्शनको प्रतिफल हो, जसले ध्यानले ब्रेनको क्षमता अभिवृद्घिमा मद्दत गर्नुका साथै गल्तीप्रति सजग रहने सीप विकास गर्छ भन्ने देखाएको छ,’ मोजरले भने, ‘यसबाट माइन्डफुलनेस मेडिटेसन क्षमता अभिवृद्धिका लागि साँच्चिकै प्रभावकारी हुने रहेछ भन्नेमा विश्वास बढाएको छ।’
पछिल्लो समय माइन्डफुलनेसले आममानिसको ध्यानाकर्षण गरेको छ। त्यही सन्दर्भमा लिनले रिसर्चरको सानो टिम बनाएर न्युरोवैज्ञानिक पद्धति अपनाएर ध्यानको मनोवैज्ञानिक र कार्यदक्षता प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेका छन्।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ४, २०७८ २१:२६